Waa maxay galaxy: astaamaha, noocyada, qaabeynta iyo muhiimadda | Saadaasha Shabakadda
Waa maxay galaxy
Adduunyada waxaa jira kumanyaal agglomerations ah oo xiddigo leh qaabab kala geddisan oo martigaliya dhammaan noocyada jirka samaawiga ah. Waxay ku saabsan tahay galaxies. Markii wax laga waydiiyey waa maxay galaxyWaxaan dhihi karnaa waa qaabdhismeedyo waaweyn oo koonka ka jira halkaasoo xiddigaha, meerayaasha, daruuraha gaaska, siigada cosmic, nebulae iyo agabyada kale la isugu geeyo ama u dhow ficil soo jiidashada culeyska.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa waxa uu yahay galaxy, maxay yihiin astaamaha iyo noocyada jira.
1 Waa maxay galaxy
3 Noocyada galaxyada
4 Asalka iyo horumarka
Waa koox ama agglomeration aad u ballaaran oo xiddigo ah halkaas oo laga helo dhammaan noocyada meydadka samada, sida meerayaasha, nebulae, boodhka laabta iyo walxaha kale. Muuqaalka ugu muhiimsan in galaxyadu waxay leeyihiin soo jiidashada cuf isjiidadka oo isku haya dhammaan qalabkan. Aadamuhu wuxuu awood u yeeshay inuu arko galaxyada taariikhdayada oo dhan sida balastarrada cirka habeenkii. Thanks to horumarka tikniyoolajiyadda aan hayno oo aan ka hayno macluumaad dheeri ah oo iyaga ku saabsan.
Nidaamkayaga qorraxda ee qorraxda iyo meerayaasha oo dhami ku yaalliin waa qayb ka mid ah galaxyada loo yaqaan Milky Way. Waqtiyadi hore, cidna ma ogeyn waxa xarig cadaan ah oo cirka ka tallaabay ku saabsan yahay waana sababta ay ugu magac dareen wadada caanaha. Xaqiiqdii, magacyada galaxy iyo Milky Way waxay ka yimaadeen asal isku mid ah. Griiggu waxay aaminsanaayeen in xiddiguhu yihiin dhibco caano ah oo ay rusheeyeen ilaahadda Hera intii ay quudinayeen Hercules.
In Milky Way waxaan heli karnaa sameynta dhowr xiddigood iyo boodh isku dhex jira. Kuwa ugu caansan waa nebulae iyo kooxo kooxeed. Sida loo maleynayo, waxay sidoo kale ka jiraan galaxyo kale. Galaxies waxaa loo kala saaraa iyadoo loo eegayo cabirkooda iyo qaabkooda. Waxay u dhexeeyaan xiddigo fara badan oo leh "kaliya" tobanaan milyan oo xiddigood ilaa xiddigo waaweyn oo ay ku jiraan balaayiin xiddigood. Marka la eego qaabka, waxay noqon karaan kuwo ilbaxa ah, muquuninaya (sida Milky Way), lenticular ama aan joogto ahayn.
Adduunyada la arki karo, waxaa ku jira ugu yaraan 2 tiriliyan galaxis, badankooduna waxay leeyihiin dhexroorro u dhexeeya 100 illaa 100.000 falanqeyn. Qaar badan oo iyaga ka mid ahi waxay ku urursan yihiin kooxo galaxy ah oo kuwani waxay ku jiraan kooxo waaweyn.
Waxaa lagu qiyaasaa in illaa 90% cufka galax kasta wuxuu ka duwan yahay arrinta caadiga ah; jira laakiin lama ogaan karo, inkasta oo saamaynteeda ay noqon karto. Waxaa loogu yeeraa arrinta madow maxaa yeelay ma soo saarto iftiin. Xilligan, waa uun fikrad aragtiyeed oo loo adeegsado in lagu sharxo hab-dhaqanka galaxies-ka.
Mararka qaar galaxy wuxuu u soo dhawaadaa galakle kale aakhirkiina way isku dhacaan, laakiin way weyn yihiin wayna bararsan yihiin ku dhowaad ma jiro isku dhac u dhexeeya walxaha iyaga sameeyay. Ama, liddi ku ah, masiibo ayaa dhici karta. Sikastaba xaalku ha ahaadee, maxaa yeelay culeyska cufku wuxuu keenaa shay isku uruursada, isugeynta ayaa badanaa keenta dhalashada xidigo cusub
Galaxies-ka ayaa ka jiray koonka muddo dheer ka hor abuuritaanka nidaamka qorraxda. Kani waa nidaam ka kooban waxyaabo badan, sida xiddigo, xiddigood, quarsar, godad madow, meerayaasha, siigada cosmic, iyo galaxies.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo loo kala sooco galaxies, laakiin midka ugu caansan waa qaabkooda.
Galaxyada Elliptical: waa kuwa leh muuqaal elliptical ah cidhiidhiga ay leeyihiin dariiq dhexdooda awgeed. Waxay ka kooban yihiin xiddigihii ugu da'da weynaa ee badanaa laga helo koox-kooxeedyada. Kuwa ilaa hadda la yaqaan, galaxyada ugu waaweyni waa ellipticals. Waxa kale oo jira kuwo iyaga ka yar.
Galaxyada muquuninta: waa kuwa leh qaab wareeg ah. Waxay ka kooban tahay nooc cajalad ah oo la simay oo gacmo ku leh hareeraha taasoo siinaysa qaabkeeda astaamaha. Qadar fara badan oo tamar ah ayaa ku urursan qeybta dhexe waxayna badanaa ka kooban yihiin god madow oo gudaha ah. Dhammaan agabyada sida xiddigaha, meerayaasha iyo boodhku waxay ku wareegaan bartamaha. Kuwa leh gacmo aad u dhaadheer waxay qaataan qaab dheeri ah oo u eg in ay u egyihiin barbell ka badan wareegga. Bartamaha galaxyadan ayaa ah meesha loo maleeyo inay ku dhashaan xiddigo.
Galaxyo aan caadi ahayn: iyagu ma laha qaab-dhismeed qeexan, laakiin waxay u muuqdaan inay leeyihiin xiddigo da 'yar oo aan weli la helin.
Galaxyada Lenticular: waxay leeyihiin qaab udhaxeeya galaxies muquuninta iyo elliptical. Waxaa la dhihi karaa waa cajalado aan gacmo laheyn oo leh qaddar yar oo maaddada interstellar ah, in kastoo qaarkood ay soo bandhigi karaan qaddar cayiman.
Gawaarida: sida magaca ka muuqata oo kale, waxaa jira qaar leh qaabab yaab leh oo aan caadi ahayn. Way ku yar yihiin xagga halabuurka iyo baaxadda.
Asalka iyo horumarka
Asalka galaxyadu wali waa mawduuca dood aan dhammaad lahayn. Marka loo eego aragtida isla magaca, cilmi-baarayaashu waxay rumaysan yihiin inay bilaabeen inay sameystaan ​​wax yar ka dib Big Bang qarxo. Waxay ahayd qaraxa cirka ee dhashay dhalashada koonka. Marxaladda qaraxa kadib, daruuraha gaaska ayaa la isku duubay oo lagu cadaadiyey ficilka culeyska, samaynta qaybta koowaad ee falanqaynta.
Xiddiguhu waxay ku soo ururin karaan rucubyo caalami ah si ay u banneeyaan galaxyada, ama waxaa laga yaabaa in marka hore qaababkoodu u samaysan yahay galaxyo ka dibna xiddigaha ku jira ay isu yimaadaan. Galaxyadan yar-yar ayaa ka yar kuwa ay hadda yihiin oo isu dhow, laakiin markay isku dhacaan oo ay qayb ka noqdaan koonka sii ballaaranaya, way korayaan oo is beddelayaan.
Inta badan teleskoobyada casriga ahi waxay awoodeen inay ogaadaan galaxyo aad u da 'weyn, kuwaas oo soo bilaabmay wax yar ka dib Big Bang. Milky Way wuxuu ka kooban yahay gaas, boor, iyo ugu yaraan 100 bilyan oo xiddigood. Waa halka meeraheennu ku yaallo oo u qaab eg wareegga xayndaabka. Waxay ka kooban tahay gaas, boodh, iyo ugu yaraan 100 bilyan oo xiddigood. Daruuraha qaro weyn ee boodhka iyo gaaska ee ka dhigaya wax aan macquul ahayn in si muuqata loo arko, xarunteeda ayaa ah mid aan lakala garan karin. Si kastaba ha noqotee, saynisyahannadu waxay aaminsan yihiin inay ku jiraan god madow oo aad u weyn, ama si la mid ah, god madow oo leh tiro kumanaan ah ama malaayiin ah qorraxda.
Waxaan rajeynayaa in xogtaan aad waxbadan kaga baran karto waxa uu yahay galaxy iyo astaamaha uu leeyahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Waa maxay galaxy
Burburinta lakabka Ozone